Gunjan FM 105.3 होटल ब्यबसाय आम्दानीको स्रोत हो, अध्यक्ष देबेन्द्र अर्याल
विगत लामो सयम देखि रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा होटल व्यवसायमा संग्लन रहदै २०७३ साल माघ ८ गते भएको होटल ब्यावसायी संघ रौतहटको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्बाचित भएका देवेन्द्र आर्यालले होटल क्षेत्रको विकाशका लागी गरेको कार्य र संघको भावी योजनाका बारेमा गुञ्जन एफएमका दिपेश पौडेले गरेको कुराकानीको अंश
रौतहटमा होटल व्यवसायकोे अवस्था कस्तो छ ?
रौतहटमा होटल व्यवसायीको अवस्था कतै धेरै राम्रो छ भने कोहि स्थानमा सन्तोषजनक छ । पुर्व पश्चिम राजमार्ग र बाँस बस्नका लागी उपयुतm स्थान भएकाले चन्द्रनिगाहपुरमा होटल व्यवसाय उतम मानिन्छ । यस व्यवसाय फस्टाउने सर्वप्रथम आधार चाहिन्छ । पर्यटन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक र पुरातात्वीक महत्व भएको स्थान प्रचार प्रसार नभएपनि पुर्व पश्चिम राजमार्गसंगै जोडिएका कारण होटल व्यवसायी आम्दानीको स्रोत बनेको हो । यहाँ लामो दुरीका यात्रुवाहक बस खाना खान रोक्ने गरेकाले पनि होटल व्यवसायलाई मद्धत पुगेको छ । सम्भवतः चन्द्रनिगाहपुरको आर्थिक स्रोत नै होटल व्यवसायी हुनुपर्छ । तर दक्षिणी भेगमा होटलहरुको संख्या कम छ भने व्यवसाय सन्तोषजनक नै छ । भारतिय पर्यटक तथा तिर्थयात्रुले गर्दा दक्षिणी भेगका होटल व्यवसायमा सुधार आएको छ । समग्ररुपमा भन्दा रौतहटमा होटल व्यवसायको अवस्था राम्रो रहेको पाईन्छ ।
रौतहटमा होटल व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको कारण के हो ?
राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार आउन थालेपछि होटल व्यवसायमा लगानीको बतावरण बनेकोे हो । बिगतमा तराईमा शसस्त्र गतिविधी गर्दे आएका भूमिगत समूहको आतंकका कारण होटेल व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यबसायीहरुको संख्या न्यून र व्यवसाय नै संकटमा परेको थियो । अहिले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा क्रमिक सुधार आउन थालेपछि व्यवसायीहरुले होटल क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अर्को तर्फ जिल्लामा रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाहरुले कार्यक्रमहरु बढाउन थालेपछि पनि व्यवसायीलाई होटल क्षेत्रमा लगानी गर्ने हौषला मिलेको छ । होटल व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी नडुव्ने र आम्दानीको स्रोत राम्रो हुने भएकाले लगानीकर्ताले ढुक्क भएर होटलमा लगानी गरेका छन् । चन्द्रनिगाहपुर र गौर पछिल्लो समयमा मात्र करोडौका लगानीमा होटलहरु खुलेका छन् । अहिले जिल्लामा करिव एक अर्व भन्दा बढि होटल क्षेत्रमा नै लगानी भएको पाईन्छ ।
होटल व्यवसायी संघ रौतहटले कस्ता कस्ता कार्य गर्दै आएको छ त ?
जिल्लाका सम्पुर्ण होटल व्यवसायीहरुको हक अधिकारका लागी संघले कार्य गर्दै आएको छ । व्यवसायमा देखिएको समस्या, चुनौति र न्युनिकरण उपाय सहित संघले विभिन्न कार्य गरेको छ । त्यति मात्र नभई होटल व्यवसायीलाई समय समयमा तालिम, गोष्ठी तथा सचेतनाका कार्यक्रम समेत गर्ने गरेको छ ।
बेला बेलामा रौतहटको होटल व्यवसायमा नकरात्मक आरोप लाग्ने गरेको छ नी ?
अपराधिक तथा यौनक्रियाकलापका कारण व्यवसायलाई नै नकरात्मक असर पारेको छ । तर समग्रमा होटल व्यवसायलाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु उपयुतm मानिदैन् । छिटो समयमा आर्थिक लाभ लिन व्यवसायीकले यस्ता क्रियाकलाप गर्नु क्षेणिक भएपनि दिर्घकालिन रुपमा जाँदैन् । यसले गर्दा अन्य व्यवासयीलाई असर पर्ने हुँदा यस्ता क्रियाकलाप नगर्ने होटल व्यवसयालाई सुझाव दिन्छुु । अर्को तर्फ होटलमा बास बस्न आएका व्यतिmहरुको परिचय खुल्ने कागज काउन्टरमा लिनु पर्छ । शंकास्पद लागेको गतिविधि भएमा तुरुन्त प्रहरीलाई खवर गर्नु पर्छ यसले गर्दा अपराधिक तथा यौनजन्य घटना रोक्न सकिन्छ । व्यवसायिक हितमा संघ भएकाले संघको अनुरोधलाई पालन गर्नु व्यवसायको कर्तव्य हो । बिकृतिमुखी भन्दा पनि सभ्य र सेवामुखि व्यवसाय गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो ।
होटल व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गरेर कसरी लाभ लिन सकिन्छ ?
कोहि कसैले व्यवसाय क्षेत्रमा लगानी गर्नु नै लाभ लिनका लागी हो । होटल व्यवसाय सेवाप्रदायिक व्यवसाय भएकाले सेवामा ध्यान दिर्नु जरुरी छ । सेवा दिएर लाभ लिन सजिलौ छैन् ।सेवामुखि भावनाले व्यवसाय गरेमा लाभ पनि निश्चय नै लिन सकिन्छ ।सेवा सुबिधामा जोड दिदै पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने बातावरण बनाएर व्यवसाय गरेमा पक्कै पनि लाभ लिन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित र मार्यादित बनाउन व्यवसायीको दायित्व भएकाले जिम्मेवारी लिएर पूरा गर्नु पर्ने छ ।
होटल व्यवसायी संघ रौतहटकोे भावी योजना के छ ?
पक्कै पनि कुनै संघ, संगठनले अगामी दिनमा गर्ने कार्य तथा भावी योजना बनाएका हुन्छन् ।त्यसैअनुरुपमा होटल व्यवसायी संघ रौतहटले पनि भावी कार्य योजना बनाएको छ । होटल प्रर्वद्धनका लागीे बिगतमा गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिनुका साथै व्यवसायीक हकहितमा संघले अगामी दिनमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने छ । होटल व्यवसाय प्रर्वद्धनका लागी महोत्सव तथा सास्कृतिक कार्यक्रम गर्ने छ । यस्तै संघले जिल्लामा रहेका पर्यटन, धार्मिक तथा ऐतिहासिक र पुरातात्वीक महत्व भएका स्थानको पहिचान गरि प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाह्यपर्यटक भित्राउनु नै संघको मुख्य योजना हो । संघका योजना धेरै छन् बिस्तारै बिस्तारै कार्यन्वयनमा ल्याउने चरणमा छौ ।यसका लागी संघले विभिन्न निकायसंग छलफल, समन्वय र सहयोग गर्ने छ ।
अन्तयमा होटल व्यवसायीलाई के भन्न चहानुहुन्छ ?
व्यवसायिक हक हितको पक्षमा संघ भएकाले यसमा आवद्ध हुन होटल व्यवसायी मित्र सार्थीलाई अनुरोध गर्दछु । अहिले जिल्लाभरीका व्यवसायीलाई संघमा आवद्ध गराउने काम भएकाले यसममा आवद्ध हुन सुझाव दिन्छु ।समस्यामा संघले सहयोग गर्ने भएकाले सवैलाई एउटै छाता मुनी बस्न आग्रह गर्छु ।